Jubbaland oo DF eedeyn usoo jeedisay | KEYDMEDIA ONLINE
Jubbaland oo DF eedeyn usoo jeedisay
Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray eedeyn dusha kaga tuuray madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya.
KISMAAYO, Soomaaliya - War qoraal ah oo si rasmi ah uga soo baxay Xafiiska Wasaaradda Warfaafinta Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa eed loogu soo jeediyay madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu yiri "Dowlad Goboleedka Jubbaland waxay waxay aad uga xuntahay xaaladda murugsan ee muddada dheer ka jirtay Gobolka Gedo, taasoo caddeyneysa in Madaxweynaha Soomaaliya iyo Hay'adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka oo isticmaalaya magaca Qaranka Soomaaliyeed iyo hantida umadda Soomaaliyeed in ay colaad ka abuureen gobolka Gedo ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, arrintaas oo muddo sanad ah taagneyd".
Warsaxaafadeedka ayaa lagu caddeeyay in Dowlad Goboleedka Jubbaland ay is difaaci doonaan, waxayna cawaaqib xumada ka dhalata eedeeda dusha ka saareen madaxda dowladda Soomaaliya gaar ahaan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo.
Halkan hoose ka akhriso Warsaxaafadeedka oo dhammeystiran: